पैसा नहुने सुत्केरी हुनेवाली दोजिया नारी थापाथली हस्पिटलको पेटीमा सिट नपाएर छटपटाइरहन्छिन्। तिनलाई त्यहाँ ड्युटीमा खटिइरहने प्रत्येक सेतो कोटका बुज्रुक युवा रङहरूले घृणा र बेवास्ता पस्किरहन्छन्। एकै छिनमा मन्त्रीजीले डाक्टरसालाई फोन गरेको सुनिन्छ। उनकी भान्जाकी साथीकी नातेदारको छिमेकीलाई डेलिभरी समस्या छ, हेर्नुपर्ने भएको खबर पाएको बुझिन्छ। तब एकाएक भिआइपि बेड तयार हुन्छ। उता गन्हाउने पेटीमा बेसहारे बनेकी ती दोजिया नारीका श्रीमान्लाई अकस्मात् फोन आउँछ, ‘हैन, क्या हो पारा, यो महिनाको भाडा दिनुपर्दैन। आज महिना सुरु भएको टिन डिन भो। घरबाट निकाल्ड्यौँ ? कष्टो सरम नभाको मान्छे। टाइममा भाडा नडिनेले अर्काको घरमा बस्न लाज छैन….।’ सुत्केरीलाई छिँडीमै छोडेर श्रीमान् आजको भारी खेप्न कालीमाटी नगए श्रीमतीलाई ज्वानो केले किन्ने ! यत्तिकैमा श्रीमती चाहिँलाई व्यथाले च्याप्छ। कसैले दया गरेर जबर्जस्ती हस्पिटल भित्रसम्म पुर्याउँदा कालीमाटीमा आँसु र पसिना बगाइरहेको भरिया श्रीमान्ले एउटाको सामान अर्कैकामा हालेकोमा गोधाइ खाइरहन्छन्। तब पनि भावनामा डुबेर नव सन्तानको सपना तुनिरहन्छन्। उही सेतोकोटका ठिटाठिटीको कर्कस आवाजका फटाफट हिँड्ने सरकसरक आवाजमा। एउटा हुनेवाला बाबुले भारी बोकिरहँदा त्यहाँ अर्को हुनेवाला बाबुले भारी बोकाएर सुत्केरीलाई हर्लिक्स, काजु, किस्मिस, घिउ…. किनिरहन्छन्। अरे, हत्तनपत्त दगुरेर हस्पिटल पुगको फोहोरी भरियालाई भित्र जान मनाही गरिन्छ। बच्चा जन्मिन्छ, आमाले आफ्नो चिनो छोड्छिन्। बच्चाकी आमा मात्र शरीरकी……त्यो रोदन र खुसी न हाँस्न लायक न त रुन नै। सेता कोटवालाहरू काउछो पन्छिए राम्रो मान्छन्, आखिर नौलो लाग्दैन पनि। कसैकसैले चुकचुकाउँछन्। उता मन्त्रीजीको फोनमा अघि बधाई ग्रहण गरेका डाक्टरसाब घर पुगेर आनन्दमा निदाउँछन्।
प्रत्येक सेतो कोटमा घरबारी र खेतबारीको नाम लेखिँदा शरीरले अलिकति साहस पाएर मनले अशान्ति भिर्छ। जिन्दगीमा नदेखेको रकमको बिटोलाई एकछिन खोजीमेली गरेर बटुल्ने एउटा नागरिक हैरानीको सिरानीमा एउटा कोठामा भाडा लिएर बस्दा तिरेको रकम र बिरामी जोगिनेको दोसाँधमा कति तड्पिन्छ, भक्कानिन्छ। भनसुनको कोसिसमा तड्पेको निरीह मान्छे चन्द्रसूर्य अङ्कित झण्डालाई हेर्छ। सगरमाथाको सेतोसँगै अत्तालिएर तर्सिन्छ। खै किन, ऊ हतास छ। अनायास चार पैसाको जोहो गर्ने सपना चकनाचुर भएर फुट्छन्। सेतोकोटको चानचुने रवाफमा अत्तालिएको त्यो नागरिकले नागरिकताको फोटोलाई नियाल्छ। सादा र पुरानो लाग्छ। उसको शिरको ढाका टोपी र कलिलो अनुहारमा छोराको प्रदीप्त अनुहारमा छोरोलाई डाक्टर नबन्न आग्रह गर्ने प्रण गर्छ। हो, गरिबका लागि, असक्तका लागि त यो संसार लायक होइन। बरु, आफैँ जस्तो गाउँको नजान्ने मान्छे काठमाडौँमा ढोका खोल्न नजान्दा लाञ्छित भएको अनि चर्पी गर्न नजानेको लज्जास्पद पाखेपनामा गम्छ। जीवन नरक जस्तो मान्दै गर्दा सेतो कोटले सधैँ घोचिरहेको पीडामा सपनामा उसलाई तर्साउँछन्। सबैले जिन्दगीभर कमाएर अन्तिममा थन्क्याउने सेतो कोटमा आइस्युमा अर्को बिरामी नआएसम्म चार दिन अगावै मरेको लासले पैसाको हाँगा बढाइरहन्छ। अर्को बिरामी ऊभन्दा पैसावाल आएमा बेड चाँडै खाली हुन्छ र नरकधामबाट पार पाइन्छ। काउन्टरमा भनिन्छ, ‘हजुरको थ्रि मिलियनको बिल छ ।’ उता सेतो कोट लगाउने कर्कस बोलीका एकजना छिटोछिटो हिँड्दै भित्र छिर्छन्। गार्डले सलोट हान्छ, काउन्टरकीले एक मुस्कानले स्वागत गर्छे। सबै सतर्क हुन्छन्। १५ मिनेटमा ५० बिरामी नियालेर दुई दिनपछिको भाकामा ती साब निस्कन्छन्। थ्रि मिलियनले पसिना फुटिरहन्छ। थ्रि हजारको हैसियत नहुने बबुराले सोच्छन्– सायद, खाता नम्बर पहिला नै सेतोकोटको नाममा हुन्छ होला…….।